H.E. U Lwin Oo Presents Credentials to President of Bangladesh – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Lwin Oo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the People’s Republic of Bangladesh, presented his Credentials to His Excellency Mr. Md. Abdul Hamid, President of the People’s Republic of Bangladesh on9January 2018, in Dhaka.
Dated. 16 January 2018
သံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦးသည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဒါကာမြို့၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ မိုဟာမက် အဗ္ဗဒူလ် ဟာမစ်ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်